प्रहरीले गाउँ मै फेला पार्यो यस्तो प्रमाण २६ वर्षका युवा परे पक्राउ, किन गरेन सार्वजनिक
अमेरिकाले दियो कसैलाई नदिएको कुरा केपी ओलीलाई, सबै आश्चर्यमा !
कविर राजभण्डारी - शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ ३:३४
नेकपा एमालेका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले केपी शर्मा ओलीलाई खुलेर बधाई दियो । कम्युनिस्ट नाम सुन्न नचाहने अमेरिकाले ओलीलाई बधाई दिएपछि धेरैको चासो बढेको छ ।
डा. बाबुरा भट्टराई: संविधान संशोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ |
यूरिका राजभण्डारी - शनिबार, मंसिर १८, २०७८ ६:०५
सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संखुवासभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर–१ को उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको श व फेला परेको घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
शनिबार, भदौ २६, २०७८ ७:४६
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। संखुवासभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर–१ को उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको श व फेला परेको घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । केही प्रमाण फेला परेपछि ति ब्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले र गत लागेको रड कार्की परिवारको घर छेउमै फेला पारेको छ।
ति युवक २६ वर्षका भएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । प्रहरी अुनसन्धान उनीविरुद्ध केन्द्रित छ। ति युवकको भाईले लगाएको सर्टमा र ग त लागेर धोएको जस्तो देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । सोधपुछ गर्दा ति १८ वर्षका भाईले त्यो सर्ट आफ्ना दाइको भएको बताए पछि २६ वर्षका उनका दाई पक्राउ परेका हुन् ।
उनको मानसिक सन्तुलन पनि ठिक नभएको पाइएको ती प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । प्रहरी आफु घटना र ति युवा बारे निश्चित भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीले युवकलाई मंगलबारदेखि नै निगरानीमा राख्दै आएको थियो।
सोमबार बौद्धमान कार्कीका श्रीमती पार्वती कार्की, छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी कमला कार्की, नातिनी बुहारी रञ्जना कार्की, पनाति विपीन कार्की र पनातिनी गोमा कार्कीको श व फेला परेको थियो ।
घटनास्थलमा प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी, संघीय प्रहरी कार्यालय धरानदेखि प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रव कुँवर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभादेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीलगायतको टोली छ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मतदान
सविना गौतम - शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ २:०३
यहाँ बालविवाह न्यूनीकरण गर्नु ठीक कि बेठीक भन्दै मतदान भइरहेको छ । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै विद्यार्थी, अभिभावक जनप्रतिनिधिहरू मतदानमा सहभागी भएका छन् ।
देशप्रति समर्पित बनाउन विद्यार्थीलाई सेनाको निरन्तर तालिम: उनीहरु भविष्यमा कहाँ पुग्छन् ?
यूरिका राजभण्डारी - बिहिबार, मंसिर १६, २०७८ ७:२१
हरेक वर्ष देशका विभिन्न विद्यालयहरुमा विधार्थीहरु सैनिकको जस्ता पोसाक लगाएर प्रशिक्षण गरिरहेका भेटिन्छन्। झट्ट हेर्दा उनीहरु आर्मी बन्न लागेका हुन् कि जस्तो लाग्छ।
पशुपतिमा बाला चतुर्दशी मेलाको तयारी पूरा
यूरिका राजभण्डारी - बिहिबार, मंसिर १६, २०७८ १२:२७
दिवङ्गत पितृका नाममा महादीपदान गर्न आउने भक्तजनको आज बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भीड लाग्न थालेको छ । बेलुकी बत्ती बालिने भए पनि आज पशुपति क्षेत्रमा लाखौँ भक्तजन आउने भएकाले ठाउँको व्यवस्था गर्न बिहानैदेखि भक्तजन आएका हुन् ।
देशभरका प्रहरीहरुका लागि निकै ठूलो खुसीको खबर आयो, सबैभन्दा ठूलो फाइदा तल्लो दर्जाकालाई !
यूरिका राजभण्डारी - बुधबार, मंसिर १५, २०७८ ९:३९
सरकारले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा मनोबल उच्च राख्न वरिष्ठ नायब निरीक्षक ९बसई०, वरिष्ठ हबल्दार ९बह० र सहायक हबल्दार ९सह० गरी तीन पद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तीन बिगाहा खेतको धानमा आगलागी रौतहटमा
यूरिका राजभण्डारी - सोमवार, मंसिर १३, २०७८ ८:१४
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामातीन बिगाहा खेतको फलेको धानमा आगलागी भएको छ । देवाही गोनाही–७ प्रेमपुर गोनाहीका बुधाई राय यादवको दाँई हाल्न खलिहानमा राखिएको धानको भारीमा आगलागी भएको हो ।
यूरिका राजभण्डारी - शनिबार, मंसिर ११, २०७८ १०:३६
दिनप्रति दिन सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि सरकारले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ।